Xildhibaano iyo wakiilo ka socda UN oo tegay Xudur – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xudur – Mareeg.com: Wafdi Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hey’adaha Qaramada Midoobay ayaa gaaray maalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay ugu kuur galaan xaaladda nololeed ee halkaasi ka jirta.
Wafdigan isugu jira Xildhibaannada iyo saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa waxa ay kormeer ku tegeen xarunta gobolka, saldhiga Booliska, isbitaalka guud ee magaalada oo aan helin wax dib u dayactir ah tan iyo bur burkii dalka iyo xarumo kale.
Xildhibaan Maxamed Afaraale oo hogaaminayay wafdiga booqashada ku tegay gobolka Bakool ayaa warbaahinta u sheegay in booqashadooda ay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolka, isagoo hoosta ka xariiqay inay gacan ka geysan doonaan sidii dib loo soo celin lahaa adeegyada guud ee bulshada.
Gobolka Bakool ayaa ka mid ah gobollada ay ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay kala wareegeen Al-Shabaab, hase ahaatee la go’doomiyey.
Horay waxaa halkaas u tegay qaar ka mid ah wasiirada Soomaaliya, ilaa hadana dowladda Soomaaliya ma helin waddo ay ku gaarto Xudur, marka laga reebo duulimaad diyaaradeed kadib markii Alshabaab go’doomiyeen magaaladaas.